National University of Life uye Environmental Sciences rweUkraine
National University of Life uye Environmental Sciences rweUkraine Details
inotangwa : 1898
Musakanganwa kuti kurukura National University of Life uye Environmental Sciences rweUkraine
Bvunzai National University of Life uye Environmental Sciences rweUkraine
Basa National University of Life uye Environmental Sciences rweUkraine ndiko:
sika, systematize, vanounganidza uye kuparadzira zivo sayenzi kuti kuvandudza hwevanhu upenyu; chitima nezvokurara yakafanira reEuropean uye nyika uzivi uye munhu kukura.
Maererano mamiriro yepamusoro nemasangano, National University of Life uye Environmental Sciences pamusoro Ukrainehas IV accreditation pamwero, andis imwe tsvakurudzo inisitichusheni, izvo anoitisa edzidzo; kwesayenzi uye tsvakurudzo; kwesayenzi uye nzira itsva; inodzidzisa uye maindasitiri; uye ruzivo uye Consulting mabasa nechinangwa kudzidza wepanguva nyaya sayenzi nezvoupenyu zvakatipoteredza; panguva kushandiswa, kubereka uye mwero pave pano uye zvinogara mumvura zvinhu zvipenyu bio-pfuma, okusuma kwezvakatipoteredza agro idzva- uye biotechnologies, ruzivo pamusoro vakachengeteka rumutsiriro uye hwevhu, simba-kuchengetedza zvokurima dzemuchina, kwezvakatipoteredza uye zviri pamutemo kutarisirwa kumaruwa, zvichiongororwa uye masimba mitemo kutevedzera, unhu uye kuchengeteka zvirimwa, kupatsanurwa zvinhu zvakatipoteredza.
The National University of Life uye Environmental Sciences rweUkraine ndeimwe vaitungamirira muzvikoro dzidzo, sainzi netsika muUkraine. Kupfuurisa 26 vadzidzi chiuru kupfuura 600 vakapedza kudzidza, Miteva vadzidzi uye vanotsvaka studyat 3 inodzidzisa uye kutsvakurudza ne 13madhipatimendi dzinokosha kuyunivhesiti inisitichusheni (muna Kyiv) uye 10 vakaparadzana vamapoka NULES rweUkraine - Regional mumayunivhesiti pamusoro І-ІІІ accreditation yomuropa.
Educational muitiro uye kuongorora kwesayenzi paUniversity anopiwa no kupfuura 2,600kwesayenzi uye dzidzo uye pedagogical vashandi, kusanganisira 300 mapurofesa uye vanachiremba sciences, kupfuurisa 1,000 mutevedzeri mapurofesa uye PhDs.
National University of Life uye Environmental Sciences rweUkraine une zvinotevera STRUCTURAL pedzimba:
nokudzidziswa uye tsvakurudzo nemasangano;
kwesayenzi uye tsvakurudzo anotanga, kusanganisira:
• Ukrainian Laboratory pamusoro Quality uye Safety pamusoro Agricultural Products;
• Scientific-Research uye Design Institute of Standards uye zvakatipoteredza-Upinde Organic Products Technology (muna Odessa);
kudzidza, inodzidzisa uye kwesayenzi, kwesayenzi uye tsvakurudzo, dambudziko nesayenzi uye tsvakurudzo, dambudziko nesayenzi, dzidzo, zvesayenzi uye kugadzirwa kwezvinhu mumarabhoritari;
yepamusoro masangano dzidzo I-III accreditation yomuropa:
• BerezhanyAgrotechnical Institute (Ternopil nharaunda)
• NizhynAgrotechnical Institute (chernihiv nharaunda)
• Irpin Economic College (Kyiv nharaunda)
• Nemishaevo Agricultural College (Kyiv nharaunda)
• Boyarka College Ecology uye Natural Resources (Kyiv nharaunda)
• E. KhraplyvyiZalishchyky Agricultural College » (Ternopil nharaunda)
• The. MaynovaBobrovytsya College of Economics uye Management(chernihiv nharaunda)
• Mukachevo Agricultural College (Trans-Carpathian nharaunda)
• BerezhanyAgrotechnical College (Ternopil nharaunda)
• Nizhyn Agricultural College (chernihiv nharaunda) nokudzidziswa, ruzivo uye kubvunza nzvimbo:
• Lubensky ticc (Poltava nharaunda)
• Malynskyi TICC (Zhytomyr nharaunda)
• Tarashchanskyi TICC (Kyiv nharaunda)
• Mukachivskyi TICC (Zakarpatska nharaunda)
• Bobrovytskyi TICC (chernihiv nharaunda)
inodzidzisa uye kutsvakurudza mumapurazi uye tsvakurudzo zviteshi:
• Agronomic Research Station (Kyiv nharaunda)
• Boyarka Forestry Research Station (Kyiv nharaunda)
• The. MuzychenkoVelykosnytinske Education uye Research Farm (Kyiv nharaunda)
• Education uye Research Farm "Vorzel" (Kyiv nharaunda)
zvimwe STRUCTURAL pedzimba, kusanganisira:
• Ukrainian yedzidzo zvesayenzi uye utsanzi muzinda Newest zvokurima zvivako uye michina;
• Educational uye kwesayenzi kugadzirwa kunovhima papurazi;
• Mitambo uye Health Camp “Akademichnyi” (Odessa nharaunda)
The nemamiriro University chinosanganisirawo pedzimba iri muna Crimea:
South Bazi NULES rweUkraine «Crimean Agrotechnological University»;
Crimean Technical Chikoro Hydro-melioration uye Mechanisation of Agriculture;
Educational uye Research Station pegomo kurima, viticulture, paki uye foresitiri kurima.
Huru mabasa pedyo Charter yeYunivhesiti ndiwo:
1) inodzidzisa uye nemagariro mabasa:
chokudzidzisa vashandi vane dzidzo kukwana yepamusoro, inokosha dzidzo, yakakwana dzidzo, uyewo yokushanda ounyanzvi hwokugadzira nokuda mukurima uye kwezvakatipoteredza chikamu;
Urongwa mamwe hurongwa kuvandudzika pamusoro yepamusorosoro zvokurima uye kwezvakatipoteredza dzidzo muUkraine maererano zvinodiwa Bologna kwacho uye dzomunyika mitemo inogona kuenderera mberi pakati agro-bhora, bio-pfuma uye mumaruwa;
kukura kwounyanzvi kudzidzisazve pamusoro pava- kuti kurima, foresitiri, Fisheries kurima, wemhuka uye chikamu kwezvakatipoteredza;
kudzidza, kudzidzisazve uye advertising dzadzidza, kurovedza uye advertising musayenzi uye pedagogical tsvimbo yakakwirira zvinodiwa kuti University nezvimwe dzidzo uye tsvakurudzo nemasangano;
inotungamirwa vadzidzi mukuru tsika uye nyika ehurumende kuziva;
pakusikwa ezvinhu akakodzera kuti kudzidza, basa, nezveutano, zvinotivaraidza uye utano kuvandudza yevadzidzi, postgraduates, PhDs uye mudonzvo University;
gadziriro, kutsikisa, kugadzirwa uye kutengesa dzidzo, nesayenzi, zvinhu dzidzo uye yakarongeka uye nezvimwe kutsikisa zvinogadzirwa;
yekosi nokudzidziswa, kusanganisira dzidzo, kudzidzisazve uye kukura kwounyanzvi motokari, anofamba, anosanganisa vatyairi, navavezi inoshandiswa kwacho nokuda mukurima uye kwezvakatipoteredza chikamu;
2) nesayenzi, tsvakurudza uye kutsikisa mabasa:
sangano uye kuzadziswa zvesayenzi-tsvakurudzo zvirongwa kwakavakirwa chiitiko yokutungamirira wokumwe tsvakurudzo mumayunivhesiti;
sangano uye akabata pamusoro Misangano, symposia, congresses, kusanganisira dzakawanda ndivo;
bhuku mapepa esayenzi pedagogical, kwesayenzi uye nokudzidzisa mudonzvo University, zvinhu zviri musangano, symposia, misangano, Category mabasa, tsvakurudzo Mishumo uye mamwe mabhuku pamusoro pokumuka zvokurima chikamu, upfumi, mhepo mvura nenzvimbo, magariro Kugadzirwa mumaruwa;
3) dzaungagona basa:
budiriro uye implementation achiita zvaidiwa nenhungamiro zvedzidzo pfuma kudzivirirwa michina yemazuva ano uye biotechnologies, unhu gadziriro uye mitemo kwezvakatipoteredza vakachengeteka, Kuchengetedzwa razvo, simba, kungaitwa simba mune zvokurima, foresitiri, paki zvegadheni uye Fisheries nokurima uye mumunda okuchengetera, zvokufambisa uye marara okurima, chikafu uye noutachiona zvinogadzirwa;
budiriro, nguva yetariso, Standardization uye implementation pamusoro yemhando michina, zvivako okurima dzemuchina, kuwana Biology chinokosha uye zvakatipoteredza ushamwari zvinogadzirwa, mbishi zvinhu uye zvokudya kubva maindasitiri sectors pakati agro-, forest-, mvura zvakanaka uye zvakasikwa zvivako;
implementation munyika yose zvinodiwa uye kuomerera bioethics vari Diagnostics, dziviriro, kurapwa uye urongwa nemhuka nezvirimwa utano;
Kutsunga yepamusoro, kuchengeteka uye zvaidiwa dzakawanda zvinodiwa pamusoro Standardization, advertising uye kutyora zviri agro-Industrial, zvokudya uye bio-pfuma uye zvakatipoteredza zvivako;
zvichiongororwa, nokufanotaurirwa uye modeling pamusoro inogona kuenderera mberi pakati pano uye zvinogara mumvura zvinhu zvipenyu kushandisa michina ano vakarongeka Environmental Management uye kudzorerwa mumaruwa;
misangano mashoko uye kubvunza zvinotaurwa vaburitsi okurima uye voruzhinji panguva implementation pakati zvenhengo ano, vakuru hurongwa mumunda socio-zvoupfumi, munda, pamutemo noukama uye nehurumende inozowana nonzi zvokurima uye kwezvakatipoteredza sectors;
4) basa University somunhu tsvakurudzo inisitichusheni:
Urongwa dzidzo, kwesayenzi uye tsvakurudzo, uye kwesayenzi uye yemazuva kusangana senzira kuvandudza padanho mudonzvo kurovedza uye kuwedzera implementation musayenzi uye kwesayenzi mberi mune zvokurima uye zvakatipoteredza sectors kuburikidza kubatanidzwa kukura chikuru uye vakashandisa zvirongwa uye kubatsirana pamwe masangano;
nezvekugadzirwa yunivhesiti yokutsvakurudza uye utsanzi nzvimbo (kwesayenzi uye tsvakurudzo anotanga, inodzidzisa uye kwesayenzi, dzidzo, nesayenzi mumaindasitiri nokutsvakurudza uye utsanzi nzvimbo, etc.), izvo dzakanangana nekugadzirisa chinokosha zvinetso operative uye vakashandisa matambudziko zvesayenzi uye kugadzirwa kwezvinhu. Pakuwedzera pamwe chete National Academy of Sciences, National Academy of Agricultural Sciences uye nezvimwe sectoral zvikoro sciences rweUkraine uye nezvavatorwa tsvakurudzo nemasangano;
Kugadzirwa mutyairi muzvirongwa uye inotungamirwa experimental emakambani ari kugadzirwa kwikwidzana zvinogadzirwa, Kugadzirwa Unyanzvi hutsva hwokugadzira, zvinhu uye motokari, implementation dzavo muminda zvokurima, foresitiri uye mvura pakurima uye kubudiswa maindasitiri maererano dzakawanda mitemo;
kusangana musayenzi uye kutsvakurudza mabasa paYunivhesiti pamwe nenyika zvichiita mumayunivhesiti (implementation pamwe tsvakurudzo muzvirongwa, akabata pamusoro Conferences, symposia, kwokuratidzwa, nesayenzi mudzidzi makwikwi, pakuwana kwepamutemo, bhuku vagari mabasa kwesayenzi uye dzidzo (mabhuku, monographs, emirayiridzo, zvekutevedzera, etc.), paakasika dzidzo, kwesayenzi uye yakarongeka yemagetsi Database, kushandisa ano mashoko uye kukurukurirana hurongwa mune zvokurima uye kwezvakatipoteredza indasitiri);
budiriro uye implementation ari yekubasa zvekutepfenyura mberi ruzivo kuti yepamusoro, vakachengeteka uye zvemakwikwi okurima, foresitiri, fishery uye zvokudya zvinogadzirwa. Urongwa ehurumende uye arbitrage yakazvimiririra kuongorora yepamusoro uye kuchengeteka okurima uye zvokudya zvinogadzirwa uye zvakatipoteredza maererano dzakawanda uye nyika mitemo;
Kurovedza Masters zvirongwa zvinopa specialization kwavo maererano zvikuru akakodzera zveindasitiri, tsvakurudzo, kudzidzisa, kwesayenzi uye nzira itsva kuitikawo inobva achangobuda kubudirira mune zvesainzi uye nemitemo renyika Environmental Management, uyewo chigadzirwa unhu uye kuchengeteka Nhamba uye zvakatipoteredza kuti ichapa dzekushandira uye basa kuvandudza pachinhu kukura kwounyanzvi;
5) dzakawanda basa:
Urongwa dzakawanda mabasa mune zvesayenzi uye dzidzo maererano nemitemo muUkraine, enhancement yeYunivhesiti kusangana mukati dzidzo munyika uye tsvakurudzo nharaunda;
kubatanidzwa dzakawanda mabasa uye zvirongwa, kwesayenzi uye anoshanda Misangano, ekudzidzisa uye kuratidzira;
pokugadzwa vagari pamwe dzidzo uye chesayenzi vavatorwa vadyidzani, kwesayenzi uye tsvakurudzo anotanga, nzvimbo uye dzimwe songaniro kuuraya redzidzo nokutsvakurudza zvirongwa uye kupa mazano zvitupa dzidzo.
National University of Life uye Environmental Sciences rweUkraine ari National, kuzvidzora yokutonga (zvionera) mamiriro dzidzo inisitichusheni. Self-hurumende (kuzvionera) yeYunivhesiti (pasi Charter) anopa:
1) kodzero University kutora akazvimirira sarudzo uye kutora zviito zvakakodzera mukati kugona raro zvechikoro, dzidzo, nesayenzi, tsvakurudzo, kugadzirwa zveupfumi mabasa;
2) pachako mari mitemo uye mubhadharo basa regai kutambanudza vaparadzane pedzimba, inodzidzisa uye tsvakurudzo mapurazi, tsvakurudzo zviteshi, uyewo muzvikoro I-III accreditation yomuropa (zvekushandisa koreji, mumakoreji, Institutes);
3) yokuzvitonga sangano siyana uye vashandi mubhadharo, zvinofanira kushandisa mari kubva bhajeti zvinyorwa, kusanganisira mugove dzinounzwa nokuda mari uye chinokurudzira muripo;
4) implementation mamwe mabasa maererano zvakananga contractual ukama, zvibvumirano uye zvibvumirano;
5) kodzero yokuumba uye kurega mabasa STRUCTURAL pedzimba kuti ndiyo chikamu chacho, kusanganisira akaparadzana ndivo, uye ushandiswe nomutowo kutora midziyo nezvimwe zviri pamutemo masangano;
6) achiitisa vagari basa uye pamwe pasi zvibvumirano nedzimwe mumayunivhesiti, emakambani, masangano uye masangano achitevedza mitemo.
Rubvumo kwacho National University of Life uye Environmental Sciences rweUkraine
Nokuti anoshanda National University of Life uye Environmental Sciences rweUkraine vadzidzi vatorwa vaifanira kushandisa paIndaneti Via Ukrainian Munopinda Center.
Education uye Research Institutes
Education uye Research Institute of Forestry uye Park Gardening
Education uye Research Institute of Kuramba Education
Education uye Research Institute of Energetics, Kushandisa michina uye Energy kunyatsoshanda
Rorusununguko Humanities uye Pedagog
Rorusununguko Livestock Kurera uye Water Bioresources
Rorusununguko Plant Protection, Hwokushandura zvinhu zvipenyu uye Ecology
Rorusununguko Land Management
Rorusununguko Food Technology uye Quality Control pamusoro Agricultural Products
Rorusununguko Information Technologies
Rorusununguko Agricultural Management
Agrobiological weVadzidzisi Vedare
Mechanical uye muruzivo rwokugadzira weVadzidzisi Vedare
Rorusununguko Design uye Engineering
The National Agricultural University iri kutungamirira nesangano dzidzo yepamusoro muUkraine. Nhoroondo kuchitanga musi nheyo Department of Agriculture mukati Kyiv Polytechnic Institute (KPI) mamiriro, izvo tinoshandurirwa rorusununguko Agricultural kodzero 1918. Kyiv Agricultural Institute akasikwa KPI pahwaro fakaroti ichi, uye 1923 Institute ichi chakava tsika yakazvimirira dzidzo. kubva 1930 kuti 1934, Kyiv Institute of Agronomy, Kyiv Institute of Mechanisation uye magetsi of Agriculture, Kyiv AG Engineering Institute of Sugar Industry uye AG Economics Institute akanga aumbwa uye atanga basa ravo imomo. Kudya izvi vakazopiwa kurongwazve kupinda toga ne mano.
Kyiv Forestry Institute akatanga nhoroondo yaro 1840 kubva rorusununguko Forestry of Institute of Agriculture uye Forestry muguta Marimont (Porendi) izvo vakatamira kuguta Novoaleksandria (zvino Pulavy) mu 1862. Mushure pakutanga 1st World War (1914) ari Novoaleksandrian Institute of Agriculture uye Forestry akachinjirwa Kharkiv uye 1921 yakava Kharkiv Institute of Agriculture uye Forestry. mu 1930 ari Forestry rorusununguko Kharkiv Agrarian Institute rakabatanidzwa pamwe Forest Engineering rorusununguko Kyiv Agrarian Institute. Sezvo mugumisiro Ukrainian Forest Technical Institute akazviratidza uye kurongwazve kupinda Kyiv Forestry Institute chete gore.
mu 1954 Kyiv Agricultural Institute rakabatanidzwa Ukrainian Forestry Institute kupinda chete sangano iri - Ukrainian Agricultural Academy (Drop).
Panguva 1956-1962 UAA aiva dhipatimendi redzidzo Ukrainian Academy of Sciences Agricultural.
mu 1957 Kyiv murapi wemhuka Institute wakaradzikwa ayo mamiriro. Kyiv murapi wemhuka Institute anotanga nhoroondo dzaro murapi wemhuka rorusununguko KPI (1920) rakanga tinoshandurirwa yakazvimirira kupfungwa dzidzo yepamusorosoro - Kyiv murapi wemhuka uye Stock-ruminant Institute iyo Kyiv murapi wemhuka Institute vakaparadzana mune 1930.
kubva 1962 UAA akanga akaisa Bazi Agriculture of USSR.
mu 1982 kuti chikamu of Academy muna Vinnytsya rakaumbwa uye 1991 yava yakazvimirira tsika (zvino Vinnytsya State Agrarian University).
Mumakore 1985-1990 UAA akanga kubatsira uye ekufambisa mabasa zvainanga kusika zvokurima akatanga muguta Pnom-Penh (Kambodhiya).
Pahwaro UAA National Agrarian University rakaumbwa Nyamavhuvhu 1992. Maererano chirevo Verhovna Batsirai (paramende) rweUkraine №158 akaita musi July 29, 1994, mukati makadirwa mamiriro National. Kubvira panguva iyoyo rave achiidzwa National Agrarian University uye maererano Mutongo Cabinet pakati Vashumiri Ukraine № 387 akaita musi June 1, 1995, zviri pasi dzichipfekeka pokutonga Cabinet pakati Vashumiri muUkraine.
Naizvozvo nechirevo Cabinet pamusoro Vashumiri kuUkraine yaApril 23 1996 #448 uye May 29 1997 #526 Nizhyn (chernigiv nharaunda) uye Berezhany (Ternopil nharaunda) Agrotechnical Colleges, Irpin Economic Technical School, Boyarka, Nemishaevo (Kyiv nharaunda) uye Zalischyky (Ternopil nharaunda) Agricultural Technical Schools dzakaisirwa kupinda maumbirwo NAUU. kodzero dzavo nomutemo vanhu vachaponeswa. mu 1999 nokuda accreditation zvabuda Irpin uye Nemishaevo Technical Schools akazvipiwa pamwe chinzvimbo “koreji” uye 2002 Nizhyn uye Berezhany Colleges akagamuchira chinzvimbo “sangano” .
Naizvozvo nechirevo Cabinet pamusoro Vashumiri kuUkraine pamusoro 28.07.2004 № 517-p., vadyi Order of Ministry of Agricultural Policy rweUkraine uye National Agricultural University of 18.08.2004 pp. № 304/377 reSouthern Branch “Crimean Agrotechnological University” kuti National Agricultural Universit Y akasikwa (chido. kurima, Simpferopol, AR Crimea) sezvo STRUCTURAL tumisoro nomunhu wacho kodzero yepamutemo munhu. Rakavakwa pa hwaro Crimean State Agrotechnological University ari liquidated pamwe zvayo STRUCTURAL pedzimba (Order of Labor Red Flag Agroindustrial College, Bahchysaray Branch Order of Labor Red Flag Agroindustrial College, Prybrezhnensk Technical School, uye Technical Chikoro Hydromelioration uye Mechanisation of Agriculture).
Maererano Chirevo Cabinet pamusoro Vashumiri kuUkraine pamusoro 7.12.2005 №497 «About nokubatanidzwazve Bobrovick National agro-zvoupfumi Technical School» Bobrovick National Agro-zvoupfumi Technical School akawedzera kuti National Agrarian University.
The womuna the President rweUkraine # 1338 wakasainwa musi December 14, 2000 pasi rokuti "The akajekerwa National Agricultural University" uye nokugadziriswa of Cabinet pakati Vashumiri muUkraine # 202 akaita musi March 1 "About National Agricultural University" akapa Nau mamiriro wehurumende kuzvidzora hunodzorwa (zvionera) nesangano dzidzo yepamusorosoro uye nezvimwe makomisheni.
Maererano Chirevo Cabinet pamusoro Vashumiri kuUkraine pamusoro 02.10.2003, № 584 ari maumbirwo National Agrarian University rakavambwa Ukrainian murabhoritari yepamusoro uye vakachengeteka zvokurima.
Maererano Chirevo Cabinet pamusoro Vashumiri kuUkraine pamusoro 14.02.2007, № 47 “About nokubatanidzwazve Mukachevskiy State Agricultural College” Mukachevskiy State Agricultural College yakaitwa chikamu kuna National Agrarian University.
Maererano Chirevo Cabinet pamusoro Vashumiri kuUkraine pamusoro 27.08.2008, № 742 yakaumbwa Ukrainian rokudzidzisa-Sayenzi akatanga mashoko uye telecommunication kutsigira agro-maindasitiri uye kwezvakatipoteredza davi dzezvoupfumi sechinhu yoga chairema reNational Agrarian University.
Yokuwedzera dzadzidza, tsvakurudza uye utsanzi mabasa National Agrarian University kusangana zvinodiwa agro-zveindasitiri, nezvakatipoteredza uye mamwe matavi dzezvoupfumi, uyewo vanofanira kuchinja mabasa izvi zvinodiwa masangano tsvakurudzo Africa dzakawanda maererano Chirevo Cabinet pamusoro Vashumiri kuUkraine musi October 30, 2008 № 945 National Agrarian University zita kuna National University of Life uye Environmental Science rweUkraine (Nubip).
The chete chirevo akabvuma Kuronga supervisory bhodhi iri University uye akaita yakabvumira kugadziriswa kwemutemo wekuita wayo Charter. University maererano mamiriro dzakakwirira masangano edzidzo ane IV pamwero accreditation, ndiye tsvakurudzo mhando tsika, izvo anoitisa edzidzo, dzesayenzi-tsvakurudzo, nesayenzi-utsanzi, mabasa edzidzo-maindasitiri uye ruzivo-Advisory zvainanga kusimukira nezvinetso ano upenyu sayenzi zvakatipoteredza , shandisa, kubereka uye mwero kusimudzira zvoutachiona zvinhu munyika uye mvura zvinhu zvipenyu, pakatanga itsva kwezvakatipoteredza agro-hwokushandura zvinhu zvipenyu, mabikirwo kuzoita vakachengeteka uye hwevhu, simba-rinoponesa agro-ruzivo, kwezvakatipoteredza uye zviri pamutemo kutarisirwa kumaruwa, kuongorora uye kuzvidzora kuti kuchengetwa mitemo, unhu uye vakachengeteka okurima kugadzirwa, zvibereko zvayo kugadzira uye zvakatipoteredza.
Unoda kurukura National University of Life uye Environmental Sciences rweUkraine ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo
National University of Life uye Environmental Sciences rweUkraine musi Map
Photos: National University of Life uye Environmental Sciences rweUkraine pamutemo Facebook
National University of Life uye Environmental Sciences rweUkraine wongororo
Join kukurukura pamusoro National University of Life uye Environmental Sciences rweUkraine.